Bit By Bit - Ukuqwalasela ukuziphatha - 2.3.3
Imilinganiselo kwimithombo emikhulu yedatha ayinako ukuguqula ukuziphatha.
Inselele enye yophando loluntu kukuba abantu banokutshintsha indlela abaziphatha ngayo xa beyazi ukuba bayajongwa ngabaphandi. Iingcali zentlalo ngokubanzi zibiza le reactivity (Webb et al. 1966) . Ngokomzekelo, abantu banokuphinda banikezele ngakumbi kwizifundo zebhubhoratri kunezifundo zentsimi kuba ngaphambili babesazi ukuba zigcinwa (Levitt and List 2007a) . Enye into ebalulekileyo yedatha abaphandi abaninzi abayifumanayo ithemba kukuba abathathi-nxaxheba abaqapheli ukuba idatha yabo ithathwa okanye baye bajwayele ukuqokelela idatha ukuba ayitshintshi ukuziphatha kwabo. Ngenxa yokuba abathathi-nxaxheba bangasebenzi , ngoko ke, imithombo emininzi yedatha eninzi ingasetyenziselwa ukufunda isenzo esingakhange sisebenzise ukulinganisa kwangaphambili. Umzekelo, u- Stephens-Davidowitz (2014) wasebenzisa ukuxhaphaka Stephens-Davidowitz (2014) yokukhangela injini ukulinganisa i-animus kwiindawo ezahlukeneyo zaseMerika. Ukungabikho okwenziweyo kunye nokukhulu (jonga icandelo 2.3.1) uhlobo lobume beenkcukacha zokukhangela ezenza kube nzima ukusebenzisa ezinye iindlela, ezifana nohlolo.
Ukungabikho komsebenzi, nangona kunjalo, ayiqinisekisi ukuba ezi nkcukacha zibonakalisa ngokuthe ngqo ukuziphatha kwabantu okanye isimo sengqondo. Ngokomzekelo, njengomphenduli omnye kwisifundo esisekelwe kwingxowa-ndlebe sathi, "Akunjalo ukuba andinayo ingxaki, andiyikubeka kwi-Facebook" (Newman et al. 2011) . Ngamanye amazwi, nangona ezinye iimithombo ezinkulu zedatha zingasebenzi, azihlali zikhululekile kwiindawo zokuzikhethela zentlalo, ukutyekela abantu ukuba bafune ukuzithobela ngendlela engcono kakhulu. Ukuqhubela phambili, njengoko ndiza kuchaza kamva kwisahluko, ukuziphatha okufakwe kwimithombo emininzi yemithombo ngamanye amaxesha kunempembelelo ngeenjongo zobanikazi beplani, umba ndiza kubiza i- algorithmic confounding . Ekugqibeleni, nangona ukungabikho komsebenzi kulungele ukuphanda, ukulandelela indlela abantu abaziphatha ngayo ngaphandle kwemvume yabo kunye nokuqwashisa kuphakamisa iingxaki zokuziphatha eziya kuthi ndichaze ngokucacileyo kwisahluko 6.
Ezi zintathu iimpahla endizichazile-ezinkulu, zihlala zihlala, kwaye zingasebenzi-ziqhelekileyo, kodwa kungekho rhoqo, zinenzuzo yophando loluntu. Emva koko, ndiya kubuyela kwiindawo eziyisixhenxe zemithombo emininzi yemithombo-engaphelelanga, engenakufikeleleka, engabonakaliyo, ukukhupha, ukuchithwa ngokuchanekileyo, ukungcola, kunye nokukhathazeka-okuqhelekileyo, kodwa kungekho rhoqo, ukudala iingxaki zophando.